Banyere Anyị - Wenzhou Cavoli Sanitary Ware Co., Ltd.
Ibughari akwa nhicha
Lọ mposi ahịhịa
Ncha Ngwa Ngwa
Onye na-ehicha ntutu
Mposi ahịhịa njide
Anyị nwere ihe karịrị afọ 15 nke ụlọ ịwụ ngwa Manufacturing Ahụmahụ
WENZHOU CAVOLI SANATARY WARE CO., LTD bụ otu n'ime ndị na-eduga ụlọ ịsa ahụ ngwa emeputa na ekspootu na Wenzhou obodo ihe karịrị afọ 15. Anyị na-ewu dị ka a factory na 2005, na-elekwasị anya na producing.Later, CAVOLI ụlọ ọrụ aha na 2010 year.With na-aga n'ihu mmepe, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na mpaghara bụ banyere 7000 m2, ihe karịrị 80 ọrụ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Ihe ndị anyị ji eme ihe bụ Zinc Alloy, Brass & 304SS nwere agba dị iche iche dị iche iche (Chrome, Nickel Brushed, Black, Orb na na) .Ọtụtụ puku ụdị na ụdị nke ime ụlọ ịwụ nke na-ezute mkpa ụwa niile.
Afọ nke Ahụmahụ
Ọnụ ọgụgụ ụlọ ọrụ
Dị ka ọkachamara na-emepụta, anyị nwere ike ịmepụta dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị, ndị otu OEM & ODM.CAVOLI na-ekwusi ike na njikwa dị mma na njikwa ogo dị elu na mmepụta kwa ụbọchị. "Na-agbaso Ọkachasị Mma, Onye Ahịa Mbụ" bụ ebumnuche anyị. Ọzọkwa, anyị nwere ikike siri ike n'ịmepụta na ịmepụta ngwaahịa ọhụrụ dịka ụtọ ahịa na mkpa pụrụ iche nke ndị ahịa.
CAVOLI agafeela ụlọ ọrụ nyocha ma nwee ISO9001, CE na ROHS, na-akwado nnukwu ụlọ ahịa America .Mainly mbupụ 90% nke ngwaahịa anyị na naanị 10% domestically.Our ngwaahịa fọrọ nke nta mbupụ niile n'okwu ahụ na isi ahịa bụ North America, South America Europe na Mid East.Our bụ isi ahịa anyị bụ ụlọ ahịa, ndị na-ere ahịa ahịa na ndị nwe akara.
Companylọ ọrụ anyị na-abawanye iji ụkpụrụ mba na ụlọ ọrụ, na-achịkwa usoro ọ bụla, na-ekwe nkwa ogo nke akụrụngwa ọ bụla. Mgbe akụrụngwa ahụ zụrụ ahịa anyị, anyị ga-eme nyocha zuru ezu banyere arụmọrụ nke akụrụngwa anyị, wee melite teknụzụ na ogo anyị. The ụlọ ọrụ bụ ndị kasị ibu na na zuru ezu machining usoro ke Zhejiang n'ógbè.
High Oru oma
Anyị ụlọ ọrụ nwere tent nke kpọmkwem machining akụrụngwa .. Ma na-na a elu oru otu, ihe karịrị 80 mkpara. Ha ga-anwa ike ha kacha mma rụọ ọrụ dị mma nye ndị ahịa anyị. Ndị ahịa 24h ga - ere ahịa .Or ọrụ anyị ga - akpọtụrụ gị iji dozie nsogbu gị n'oge mbụ.
Anyị na-atụ anya na-anata ase n'aka gị wee bụrụ nnukwu soplaya na china na ezi mma na asọmpi ahịa!
ndị na-azụ ahịa